Huawei G9 Plus, a ọhụrụ ufọt ufọt nso na a adịchaghị imewe | Akụkọ akụrụngwa
Huawei G9 Plus, a ọhụrụ ufọt ufọt nso na a adịchaghị imewe
Ọ dịwo a ogologo oge kemgbe anyị enwewo ike ịmata ekele ọtụtụ leaks ka Huawei G9 Plus, ụfọdụ n'ime ha yiri ihe nkwadebe na-enweghị isi nke ndị na-emepụta China, karịa nkwụsị nkịtị na nke ugbu a. Hapụ esemokwu ahụ niile ụnyaahụ, ụnyaahụ ka e gosipụtara ekwentị a na China, na-ekpughe ezigbo njedebe, nke ga-abụ akụkụ nke etiti etiti ọ bụ ezie na ụfọdụ uru ya nwere ike iduga anyị itinye ya na akụkụ nke ala dị elu.
Tụkwasị na nke ahụ, Huawei lebara ya anya ọzọ ruo nkọwa ikpeazụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ anyị na-eche ihu smartphone nke a na-akpọ n'etiti. Nanị ihe na-adịghị mma bụ na n'oge ahụ a gaghị ere ya n'èzí China, ebe enwere ike idobe ya site na August 25 na-esote.
Nke a Huawei G9 Plus, na-enweghị obi abụọ, ihe mbụ ga-adọta uche anyị bụ nlezianya anya ya, nke ejiri ọla kọpa, ihe ndị kachasị mma na ihuenyo 5.5 nke na-erite uru nke ihu n'ihu na obere osisi. Anyị nwere ike ịsị na ọ dị ka ọdụ Huawei ndị ọzọ yana na ọ na-agbaso usoro nke onye nrụpụta China nke ọma. Agbanyeghị, ọnụ ọnụ a dị iche n'akụkụ ụfọdụ.
Ma ọ bụ na ihe atụ, na mgbe ogologo oge Huawei abanyebeghị na G9 Plus nke a Kirin processor, ma ahọrọla Qualcomm Snapdragon 625. Iji chọta onwe anyị, anyị ga-enyocha isi atụmatụ na nkọwa nke Huawei G9 Plus a.
1 Huawei G9 Plus Atụmatụ na nkọwa
2 Ezigbo ama ama na ndekọ 4K na maka euro 320
Huawei G9 Plus Atụmatụ na nkọwa
Akụkụ: 7.3 ọkpụrụkpụ millimeters
Arọ: gram 160
Ihuenyo: 5.6 sentimita asatọ na mkpebi HD zuru oke yana 400 pixels kwa inch
Ncheta RAM: 3GB ma ọ bụ 4GB, dabere na ihe nlereanya anyị họọrọ
Nchekwa dị n'ime: 32GB ma ọ bụ 64GB gbasaa site na kaadị microSD ruo 128GB
Mkpisiaka agụ: emi odude ke edem nke ngwaọrụ dị ka ọ na-eme na ndị ọzọ Huawei ọnụ
Igwefoto na-agba ọsọ: megapixels 16 na ihe ngosi onyonyo na-acha ọkụ na ọkụ ọkụ abụọ
Igwe n'ihu: 8 megapixels
Batrị: 3.340mAh nke ga-enye anyị nnwere onwe nke a na-atụ anya gafere awa 24
4G LTE, VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, USB OTG, GPS na ụdị USB
Sistemụ nrụọrụ: Android Marshmallow nwere nhazi nke onwe gị EMUI 4.1
Ezigbo ama ama na ndekọ 4K na maka euro 320
Nke a Huawei G9 Plus, dị ka anyị kwurula, na-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị na-ere ahịa nke ekwentị mkpanaaka mejupụta, ma ọ dị elu karịa ọdụ ndị ọzọ n'ihi ọdịiche dị na ya. Nke mbụ, onye nhazi ya na-enye anyị akụkụ nchekwa, nke, nke RAM ya na-akwado, na-eme ka arụmọrụ dị mma yana ọrụ na-aga n'ihu.
Tụkwasị na nke ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla hụrụ atụmatụ ya, n'ihi ekele ya dị mma nke a na-eme ka ọ dịkwuo ekele maka akụkụ ya ndị na-aga nke ọma. Dị ka nkọwa na-adọrọ mmasị, na-ahapụ atụmatụ ahụ, anyị nwere ike ịgwa gị nke ahụ na-enye anyị ihe ndekọ vidiyo na 4K, ihe anyị ga-eburu n'uche n'ihi na ọ ga-atọ ụtọ.
Anyị ekwesịghịkwa ịkọwa igwefoto nke Huawei G9 Plus a, otu n'ime akụkụ ndị kachasị mkpa na ndị na-atọ ụtọ maka ndị ọrụ. Maka igwefoto azụ anyị hụrụ a 16 megapixel sensor, na sọrọ Ikanam flash Ma dị ka anyị kwurula, ọ na-enye gị ohere idekọ vidiyo na mkpebi 4K. Banyere igwefoto dị n'ihu, ọ na-agbakwunye ihe mmetụta 8 megapixel, nke ụkpụrụ dị ka o zuru ezu iji nweta selfie nke zuru oke.
Huawei kwadoro na ngosipụta nke G9 Plus a na maka oge ọ ga-adị na China, ọ bụ ezie na asịrị mbụ ekwuolarị na ọ ga-ekwe omume ịbịaru Europe na ọtụtụ mba ndị ọzọ gburugburu ụwa na ọnwa ndị na-abịanụ.
Ndoputa na China nke ngwaọrụ a malitere na August 25 na ọnụahịa nke yuan 2.399, ihe dị ka euro 320 iji gbanwee maka ụdị ahụ na 3 GB nke RAM na 32 GB nke nchekwa. Onye na-emepụta China maka oge ahụ akwadobeghị ọnụahịa nke nsụgharị ndị ọzọ ga-erute n'ahịa ahụ.
Eji m obi m niile kwenye na Huawei jisiri ike mepụta ọnụ kwesịrị ekwesị, jiri nlezianya rụpụta yana ọnụahịa na-atọ ụtọ. O di nwute na ugbu a anyi agaghi enwe ike inweta G9 Plus a na Europe obu ezie na m na-atụ ụjọ na ọ gaghị ewe ogologo oge iji hụ ya na mba anyị, na-enwe ike inweta ya na olile anya na ọnụahịa yiri nke ahụ A ga-enye gị site na izu na-abịa na mba nke Huawei.
Kedu ihe ị chere maka Huawei G9 Plus ọhụrụ a?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Huawei G9 Plus, a ọhụrụ ufọt ufọt nso na a adịchaghị imewe
Esi zoo foto ma ọ bụ faịlụ na ngwaọrụ gam akporo gị